10.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमी यस पढाइबाट शान्तिधाम हुँदै आफ्नो सुखधाम जान्छौ , यही तिम्रो लक्ष्य-उद्देश्य हो , यो कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन।”
तिमी बच्चाहरूले साक्षी भएर यस समयमा ड्रामाको कुनचाहिँ सीन देखिरहेका छौ?
यस समयमा ड्रामामा सम्पूर्ण दु:खको सीन छ। यदि कसैलाई सुख छ भने पनि अल्पकाल काग विष्टा समान। बाँकी दु:ख नै दु:ख छ। तिमी बच्चाहरू अहिले प्रकाशमा आएका छौ। जानेका छौ– सेकेण्ड-सेकेण्ड बेहदको सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ, एक दिन मिल्दैन अर्कोसँग। सारा दुनियाँको एक्ट बदलिइरहन्छ। नयाँ सीन चलिरहन्छ।
डबल ओम् शान्ति। पहिलो– बाबा स्व-धर्ममा टिक्नु भएको छ, दोस्रो– बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो स्वधर्ममा टिक र बाबालाई याद गर। अरू कसैले यस्तो भन्न सक्दैन– स्वधर्ममा टिक। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निश्चय छ। निश्चयबुद्धि विजयन्ती। उसैले विजय पाउँछ। के कुरामा विजय पाउँछ? बाबाको वर्साको। स्वर्गमा जानु– यो हो बाबाको वर्साको विजय प्राप्त गर्नु। बाँकी छ पदको लागि पुरुषार्थ। स्वर्गमा जानु त अवश्य छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– यो फोहोरी दुनियाँ हो। धेरै दु:ख आउने छ। ड्रामाको चक्रलाई पनि तिमीले जानेका छौ। अनेक पटक बाबा आउनु भएको छ पावन बनाएर सबै आत्माहरूलाई मच्छर सदृश्य लैजान, फेरि स्वयं पनि निर्वाणधाममा गएर निवास गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू पनि जान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई यो त खुसी रहनु पर्छ– यस पढाइबाट हामी शान्तिधाम हुँदै आफ्नो सुखधाम जान्छौं। यो हो तिम्रो लक्ष्य-उद्देश्य। यो भुल्नु हुँदैन। दिनहुँ सुन्छौ, सम्झन्छौ– हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि बाबाले पढाउनु हुन्छ। पावन बन्ने सहज उपाय बताउनु हुन्छ– यादको। यो पनि नयाँ कुरा होइन। लेखिएको पनि छ– भगवानले राजयोग सिकाउनु भयो। कृष्णको नाम राखेका छन्, केवल यो गल्ती गरिदिएका छन्। यस्तो पनि होइन, बच्चाहरूलाई जुन ज्ञान मिलिरहेको छ, त्यो गीता सिवाय अरू कुनै शास्त्रमा छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– कुनै पनि मनुष्यको बाबाको जस्तो महिमा छँदै छैन। बाबा नआउने हो भने त सृष्टिको चक्र नै घुम्दैन। दु:खधामबाट सुखधाम कसरी बन्ने? सृष्टिको चक्र त घुम्नु नै छ। बाबालाई पनि अवश्य आउनु नै छ। बाबा आउनु हुन्छ सबैलाई लैजान फेरि चक्र घुम्छ। बाबा नआए त कलियुगबाट सत्ययुग कसरी बन्न सक्छ? बाँकी यो कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैन। राजयोग छ नै गीतामा। यदि भगवान् आबूमा आउनु भएको छ भनेर बुझे त भेट्नको लागि दौडिन्थे। संन्यासीले पनि चाहन्छन् नि, भगवानसँग मिल्न। पतित-पावनलाई याद गर्छन् फर्केर जानको लागि। अहिले तिमी बच्चाहरू पद्मापदम भाग्यशाली बनिरहेका छौ। त्यहाँ अथाह सुख हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा जो देवी-देवता धर्म थियो, त्यो अहिले छैन। बाबाले दैवी राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ नै ब्रह्माद्वारा। यो त क्लियर छ। तिम्रो लक्ष्य-उद्देश्य नै यो हो। यसमा संशयको कुरा नै छैन। पछि गएर बुझ्दै जान्छन्, राजधानी अवश्य स्थापना हुन्छ। आदि सनातन देवी-देवता धर्म हुन्छ। जब तिमी स्वर्गमा रहन्छौ तब यसको नाम भारत रहन्छ फेरि जब तिमी नर्कमा आउँछौ तब हिन्दुस्तान नाम रहन्छ। यहाँ कति दु:ख नै दु:ख छ। फेरि यो सृष्टि बदलिन्छ फेरि स्वर्गमा हुन्छ नै सुखधाम। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई छ। दुनियाँमा मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ– अहिले हो अँध्यारो रात। रातमा मनुष्य धक्का खाइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरू प्रकाशमा छौ। यो पनि साक्षी भएर बुद्धिमा धारण गर्नु छ। सेकेण्ड बाई सेकेण्ड बेहद सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन अर्को दिनसँग मिल्दैन। सारा दुनियाँ को एक्ट बदलिइरहन्छ। नयाँ सीन चलिरहन्छ। यस समय सम्पूर्ण दु:खको सीन छ। यदि सुख छ भने पनि काग विष्टा समान। बाँकी दु:ख नै दु:ख छ। यस जन्ममा मुश्किलले सुख हुन्छ फेरि अरू जन्ममा दु:ख। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो रहन्छ– अहिले हामी जान्छौं, आफ्नो घर। यसमा मेहनत गर्नु छ पावन बन्ने। श्री-श्रीले श्रीमत दिनुभएको छ– श्री लक्ष्मी-नारायण बन्ने। बेरिस्टरले मत दिन्छ– बेरिस्टर भव। अहिले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ– श्रीमतबाट यो बन।
आफूसँग सोध्नुपर्छ– ममा कुनै अवगुण त छैन? यस समय गाउँछन् पनि– म निर्गुण हारामा कुनै गुण छैन, हजुरले नै दया गर्नुहोस्। दया अर्थात् रहम। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! मैले त कसैप्रति पनि दया गर्दिनँ। दया त हरेकले आफैमाथि गर्नु छ। यो ड्रामा बनेको छ। निर्दयी रावणले तिमीलाई दु:खमा ल्याउँछ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यसमा रावणको पनि कुनै दोष छैन। बाबा आएर केवल राय दिनुहुन्छ। यही उहाँको दया हो। बाँकी यो रावण राज्य त फेरि पनि चल्छ। ड्रामा अनादि छ। न रावणको दोष छ, न मनुष्यहरूको दोष छ। चक्रलाई घुम्नु नै छ। रावणबाट छुटाउनको लागि बाबाले युक्तिहरू बताइरहनु हुन्छ। रावण मतमा तिमी कति पाप आत्मा बनेका छौ। अहिले यो पुरानो दुनियाँ हो। फेरि अवश्य नयाँ दुनियाँ आउँछ। चक्र त घुम्छ नि। सत्ययुगलाई फेरि अवश्य आउनु छ। अहिले हो संगमयुग। महाभारत लडाईं पनि यस समयको हो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। यो हुनु नै छ। र, हामी विजयन्ती स्वर्गका मालिक हुन्छौं। बाँकी सबै हुँदैनन्। यो पनि जानेका छौ– पवित्र नबनी देवता बन्न मुश्किल छ। अहिले बाबासँग श्रीमत मिल्छ श्रेष्ठ देवता बन्नको लागि। यस्तो मत कहिल्यै मिल्न सक्दैन। श्रीमत दिने उहाँको पार्ट पनि संगममा छ। अरू कसैमा त यो ज्ञान नै छैन। भक्ति मतलब भक्ति। त्यसलाई ज्ञान भनिदैन। रूहानी ज्ञान, ज्ञान-सागर रुहले नै दिनुहुन्छ। उहाँको नै महिमा हो ज्ञानका सागर, सुखका सागर। बाबाले पुरुषार्थका युक्तिहरू पनि बताउनु हुन्छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ– अहिले फेल भएमा कल्प-कल्पान्तर फेल हुन्छौ, ठूलो चोट लाग्छ। श्रीमतमा नचल्नाले चोट लाग्छ। ब्राह्मणहरूको वृक्ष बढ्नु पनि अवश्य छ। यति नै बढ्छ जति देवताहरूको वृक्ष हुन्छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्नु र गराउनु छ। कलमी लागिरहन्छ। वृक्ष विशाल हुन्छ। तिमीले जानेका छौ– अहिले हाम्रो कल्याण भइरहेको छ। पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा जाने कल्याण हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको ताला अहिले खुलेको छ। बाबा बुद्धिवानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ नि। अहिले तिमीले बुझिरहेका छौ फेरि पछि गएर हेर– कस-कसको ताला खुल्छ। यो पनि ड्रामामा छ। फेरि सत्ययुगदेखि दोहोरिन्छ। लक्ष्मी-नारायण जब तख्तमा बस्छन् तब सम्वत् सुरु हुन्छ। तिमीले लेख्छौ पनि– १ देखि १२५० सम्म स्वर्ग, कति क्लियर छ। कहानी हो सत्य नारायणको। कथा अमरनाथको हो नि। तिमीले अहिले सत्य-सत्य अमरनाथको कथा सुन्छौ त्यसको फेरि गायन चल्छ। चाड-पर्व आदि सबै यस समयका हुन्। नम्बरवन पर्व हो शिवबाबाको जयन्ती। कलियुगपछि अवश्य बाबालाई आउनु पर्छ, दुनियाँलाई चेन्ज गर्न। चित्रहरूलाई कसैले राम्रोसँग देखून्, कति पूरा हिसाबसँग बनाइएको छ। तिमीलाई यो खातिरी हो, जति कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेका थियौ, त्यति गर्छौं अवश्य। साक्षी भएर अरूलाई पनि हेर्छु। आफ्नो पुरुषार्थलाई पनि जान्दछु। तिमीले पनि जानेका छौ। विद्यार्थीले आफ्नो पढाइलाई जानेका हुँदैनन् र? दिल खान्छ अवश्य– म यस विषयमा धेरै कमजोर छु। फेरि फेल हुन्छन्। परीक्षाको समयमा जो कमजोर हुन्छन् उनको दिल धड्किरहन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि साक्षात्कार गर्छौं। तर फेल भयौ भने के गर्न सक्छौ र! स्कुलमा फेल भयो भने सम्बन्धी पनि दु:खी, टिचर पनि दु:खी हुन्छन्। भन्छन् हाम्रो स्कुलबाट कम पास भए भने सम्झन्छन्– टिचर यति राम्रो छैन त्यसैले कम पास भए। बाबाले पनि जान्नुहुन्छ– सेन्टरहरूमा को-को राम्रा टिचर छन्, कसरी पढाउँछन्। कस-कसले राम्रोसँग पढाएर लिएर आउँछन्। सबै थाहा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– बादलहरूलाई ल्याउनु छ। साना बच्चाहरूलाई ल्यायौ भने उनीहरूमा मोह रहन्छ। एक्लै निस्केर आउनु पर्छ तब बुद्धि राम्रोसँग लागिरहन्छ। बच्चाहरूलाई त त्यहीँ पनि देखिरहन्छौ।
बाबा भन्नुहुन्छ– यो पुरानो दुनियाँ त कब्रिस्तान हुनु छ। नयाँ घर बनाउँदा बुद्धिमा रहन्छ नि– हाम्रो नयाँ घर बनिरहेको छ। धन्दा आदि त गरिरहन्छन्। तर बुद्धि नयाँ घरतिर रहन्छ। चुप लागेर त बस्दैनन्। त्यो हो हदको कुरा, यो हो बेहदको कुरा। हर कार्य गर्दा स्मृति रहोस्– अब हामी घर गएर फेरि आफ्नो राजधानीमा जान्छौं, तब अपार खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! आफ्ना बच्चा आदिको सम्हाल पनि गर्नु छ। तर बुद्धि त्यहाँ लागिरहोस्। याद विना फेरि पवित्र पनि बन्न सकिँदैन। यादबाट पवित्र, ज्ञानद्वारा कमाई। यहाँ त सबै छन् पतित। दुई किनारा छन्। बाबालाई नाविक भनिन्छ, तर अर्थ बुझ्दैनन्। तिमीले जानेका छौ– बाबाले त्यस किनारामा लैजानुहुन्छ। आत्माले जान्दछ– हामी अब बाबालाई याद गरेर धेरै समीप गइरहेका छौं। नाविक नाम पनि अर्थ सहित राखिएको छ नि। यो सबै महिमा गर्छन्– नईया मेरी पार लगाओ। सत्ययुगमा यस्तो भनिन्छ र? कलियुगमा नै पुकार्छन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ– बेसमझलाई त यहाँ आउनु छैन। बाबाले सख्त मनाही गर्नुहुन्छ। निश्चय छैन भने कहिल्यै ल्याउनु हुँदैन। केही पनि बुझ्दैनन्। पहिला त ७ दिनको कोर्स गराऊ। कसैलाई त २ दिनमा पनि तीर लाग्छ। राम्रो लाग्यो भने फेरि कहाँ छोड्छन् र। भन्छन् हामी ७ दिन अझै सिक्छौं। तिमीले तुरुन्तै सम्झन्छौ– यो यस कुलको हो। जो तेज बुद्धिका हुन्छन् उनले कुनै कुराको पर्बाह गर्दैनन्। ठीक छ, एक नोकरी छुट्छ अर्को मिल्छ, जो बच्चाहरू दिलभएका हुन्छन् उनको नोकरी आदि छुट्दैन। स्वयं नै आश्चर्य मान्छन्। बच्चीहरूले भन्छन् मेरो पतिको बुद्धि परिवर्तन गरिदिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई नभन। तिमी योगबलमा रहेर फेरि बसेर ज्ञान सम्झाऊ। बाबाले कहाँ बुद्धिलाई बदल्नु हुन्छ र! फेरि त सबै यस्तै धन्दा गरिरहन्छन्। जो रीतिरिवाज चल्छ त्यसैलाई समात्छन्। कुनै गुरुबाट कसैलाई फाइदा भयो, सुन्यो भने पुग्यो, उसैको पछि लाग्छन्। नयाँ आत्मा आउँछ त्यसैले उसको महिमा त हुन्छ नि। फेरि धेरै अनुयायी बन्छन् त्यसैले यी सबै कुरालाई हेर्नु छैन। तिमीले हेर्नु पर्छ– आफूलाई, मैले कति पढिरहेको छु? यो त बाबा विस्तारमा बातचित जस्तै गर्नुहुन्छ। बाँकी केवल भनिदिनु बाबालाई याद गर, यो त घरमा पनि रहेर गर्न सक्छौ। तर ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ त्यसैले अवश्य ज्ञान पनि दिनुहुन्छ नि। मनमनाभव– यो हो मुख्य कुरा। साथमा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य पनि सम्झाउनु हुन्छ। चित्र पनि त यतिबेला धेरै राम्रा-राम्रा निस्केका छन्। यसको अर्थ पनि बाबा सम्झाउनु हुन्छ। विष्णुको नाभीबाट ब्रह्मालाई देखाइएको छ। त्रिमूर्ति पनि छ फेरि विष्णुको नाभीबाट ब्रह्मा, यो फेरि के हो? बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ– यो सही हो या गलत हो? काल्पनिक चित्र पनि त धेरै बनाउँछन्। कुनै-कुनै शास्त्रहरूमा चक्र पनि देखाइएको छ। तर कोहीले कति आयु लेखिदिएका छन्, कोहीले कति। अनेक मत छन् नि। शास्त्रहरूमा हदको कुरा लेखिदिएका छन्, बाबा बेहदको कुरा सम्झाउनु हुन्छ– सारा दुनियाँमा छ रावण राज्य। तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान छ– हामी कसरी पतित बन्यौं फेरि पावन कसरी बन्छौं। पछि फेरि अरू धर्म आउँछन्। अनेक किसिमका छन्। एक मिल्दैन, अर्कोसँग। उस्तै चेहरा दुई जनाको हुन सक्दैन। यो बनिबनाउ खेल हो, जुन दोहोरिइरहन्छ। बाबा बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनु हुन्छ। समय कम हुँदै जान्छ। आफ्नो जाँच गर– म कहाँसम्म खुसीमा रहन्छु? मलाई कुनै विकर्म गर्नु छैन। तुफान त आउँछ। बाबा सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! अन्तर्मुखी भएर आफ्नो चार्ट राख्यौ भने जो गल्तीहरू हुन्छन्, त्यसको पश्चात्ताप गर्न सक्छौ। यो मानौं योगबलबाट आफूलाई माफ गर्छौ। बाबाले कुनै क्षमा या माफ गर्नुहुन्न। ड्रामामा क्षमा अक्षर नै छैन। तिमीलाई आफ्नो मेहनत गर्नु छ। पापहरूको दण्ड मनुष्य स्वयंले नै भोग्छन्। क्षमाको कुरा नै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ– हरेक कुरामा मेहनत गर। बाबा बसेर युक्ति बताउनु हुन्छ, आत्माहरूलाई। बाबालाई बोलाउँछौ पुरानो रावणको देशमा आउनुहोस्, हामी पतितहरूलाई आएर पावन बनाउनुहोस् भनेर। तर मनुष्यले बुझ्दैनन्। उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय। तिमी हौ ब्राह्मण सम्प्रदाय, दैवी सम्प्रदाय बनिरहेका छौ। पुरुषार्थ पनि बच्चाहरूले नम्बरवार गर्छन्। फेरि भन्छन् यसको तकदिरमा यति नै रहेछ। आफ्नो समय खेर फाल्छन्। जन्म-जन्मान्तर, कल्प-कल्पान्तर उच्च पद पाउन सक्दैनन्। आफूलाई घाटा पार्नु हुँदैन किनकि अहिले जम्मा हुन्छ फेरि घाटामा जान्छौ। रावण राज्यमा कति घाटा हुन्छ। अच्छा!
१) अन्तर्मुखी बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ, जति पनि गल्ती हुन्छन्, त्यसलाई दिलैदेखि पश्चात्ताप गरेर योगबलद्वारा माफ गर्नु छ। आफैले मेहनत गर्नु पर्छ।
२) बाबाको जुन राय मिल्छ, त्यसमा पूरा चलेर आफूमाथि आफैंले दया गर्नु पर्छ। साक्षी भएर आफ्नो वा अरूको पुरुषार्थलाई हेर्नु छ। कहिल्यै पनि आफूलाई घाटामा पार्नु हुँदैन।
निरन्तर यादद्वारा अविनाशी कमाई जम्मा गर्ने सर्व खजानाहरूको अधिकारी भव
निरन्तर यादद्वारा हरेक कदममा कमाई जम्मा गरिरह्यौ भने सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम.... यी सबै खजानाहरूको अधिकारको अनुभव गर्दै रहने छौ। कुनै कष्ट, अनुभव हुने छैन। संगममा ब्राह्मणहरूलाई कुनै कष्ट हुन सक्दैन। यदि कुनै कष्ट आउँछ भने पनि बाबाको याद दिलाउनको लागि। जसरी गुलाबको पुष्पको साथमा काँडा उसको बचाउको साधन हुन्छ। त्यसरी नै यी कठिनाईहरू अझै बाबाको याद दिलाउन निमित्त बन्छन्।
परमात्म श्रीमतको आधारमा कर्म रूपी बीजलाई शुभ संकल्पको जल मिलिरहेमा बीज शक्तिशाली बन्दै जान्छ।